Leukoplakia nke cervix - gini bu, kansa ma o bughi? Ndabere anya nke cervix na atypia, na-enweghị atypia - ọgwụgwọ
Leukoplakia nke cervix bụ ọnya nke akpụkpọ anụ mucous nke ahụ. N'elu ya, a na-emepụta ọkpụkpụ, bụ nke na-eme ka ngwụsị nke ngwọta pụta ìhè site nyochaa na oche gynecological. Ihe ize ndụ nke ọrịa ahụ bụ nnukwu ihe ize ndụ nke imebi ọrịa kansa.
Ọrịa leukoplaịa na-arịa ọrịa cancer ma ọ bụ na ọ bụghị?
N'ịhụ nchoputa dị otú ahụ na ngwụsị nke dọkịta, ụmụ nwanyị adịghị eche n'echiche mgbe niile ihe leukoplakia bụ. Ị nwere ike ịghọta ebe aha ọrịa ahụ si malite site n'ịgbalị ịsụgharị okwu ahụ. Na nsụgharị site na Grik, "leukoplakia" bụ "ihe ngosi". A na-ahụ ụdị ihe a n'elu akpụkpọ anụ mucous nke cervix. Ha sitere na nkpo nke epithelium na-ekwenye ekwenye, ha na-ebili elu karịa anụ ahụ.
Site na ọdịdị ya leukoplakia nke cervix anaghị esite n'usoro ụlọ obibi. N'okwu a, ndị dọkịta anaghị ezo aka na ọrịa oncology. Otú ọ dị, enwere ike ịrịa ọrịa ahụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike ịmepụta ya na canal cervical. Dika akuko onodu ogugu di iche iche, leukoplakia bu ihe dika pasent 5 nke ihe omumu nile nke cervix.
Leukoplakia nke cervix nwere ike imetụta ụmụ nwanyị na-amụ nwa, ma a na-enwekwa ọrịa nke ụmụ agbọghọ. Dabere na ogo nke mmebi nke mucosal, ọdịdị nke mkpụrụ ndụ, ụdị leukoplakia ndị a dị iche:
Leukoplakia nke ụbụrụ na-enweghị atypia
Ọtụtụ mgbe, a na-ewere ụdị ụdị ọgwụgwọ a dị ka usoro ndabere. N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị dọkịta na-eji okwu ọzọ - leukoplakia dị mfe nke cervix. Ihe ọ bụ - ndị ọrịa anaghị ama. A na-enyocha nchoputa a mgbe a na-enyocha ụbụrụ mucous na n'olu ahụ, a na-eme ka ọkpụkpụ epithelial pụta. Ihe dị iche bụ eziokwu na sel nke basal na parabasal n'adaghị mgbanwe.
Leukoplakia na atypia nke cervix
N'ịgbaso nkọwa nke "leukoplakia cervical", gịnị ka ọ pụtara, ọ dị mkpa ịkọwa ụdị ụdị ya - ụdị ihe atụ. A na-eji mgbanwe ndị dị otú ahụ mee ihe, mgbe na-eto eto na-eto eto na-amalite ibelata ibe ha. N'ihi ya, elu nke n'olu na-aghọ ihe na-egbuke egbuke, na mgbagwoju leukoplaịa na-ebili n'elu ụbụrụ mucous. A na-ahụ mgbanwe ndị dị otú ahụ mgbe ị na-eme nnyocha mgbe niile na oche ụlọ gynecology.
Mgbe mpempe microscopic nke anụ ahụ emetụta, ndị dọkịta na-achọpụta mkpụrụ ndụ mikpuru nke mucosa. Ha nwere ibu buru ibu, usoro dị iche. N'adịghị ọgwụgwọ, a na-ahụ ngwa ngwa na-elekwasị anya dị ka nsonaazụ nke sel. Ngwunye nke Whitish ji nwayọọ nwayọọ na-ekpuchi elu ala dum n'olu, na-emebi ọrụ ya, na-eme ka foto nlekọta kwekọrọ.
Kedu ihe bụ leukoplakia nke na-arịa ọrịa dị ize ndụ?
Ịkọwara ụmụ nwanyị ihe dị na leukoplakia na-arịa ọrịa cancer, ihe ndị na-akpata ọrịa a, ndị dọkịta na-eketa nnukwu ihe ize ndụ nke mmerụ ahụ n'ime cancer . Tụkwasị na nke ahụ, ọnya nke ọnyá nwere ike imetụta ọrụ nke akpanwa n'onwe ya - ọtụtụ mgbe ndị inyom nwere ụdị ọrịa ahụ na-achọpụta na ịmaliteghị ịmụ nwa, mmebi ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, e nwere nnukwu ihe ize ndụ nke ibute ọrịa, bụ nke na-esi ike nke mmebi nke ekpri pelvis.
Cukical leukoplakia - akpata
Na-agbalị ịchọta ihe mere e ji guzobe leukoplakia nke cervix, ihe kpatara ọrịa ahụ, ndị dọkịta na-agbalị ịmepụ ihe ndị na-adịghị mma. Mmebi nke usoro hormonal na usoro immune na-emetuta mmebi nke mmekọrịta dị n'etiti hypothalamus, nke na-eme ka ahụ gọọmentị na usoro ọmụmụ. N'ihi ya, usoro hyperplastic na-amalite n'ime akụkụ anụ ahụ.
Na mgbakwunye, dịka ndị dọkịta si kwuo, mgbe ụfọdụ, leukoplakia nke cervix na-etolite dịka nbịakwute usoro mmebi ahụ na mkpali:
Ọtụtụ mgbe, usoro ọgwụgwọ na-ebute dịka usoro ndabere na ọrịa ndị na-esonụ nke usoro ọmụmụ:
mmadụ papillomavirus .
Mmepe nke leukoplakia na-eme ka ọnyá nke mucous membran nke cervix mejuputa:
ogwu ime ogwu;
arụ ọrụ na akpanwa.
Mgbaàmà nke leukoplakia cervical
Ihe mgbaàmà dị iche iche, ihe ịrịba ama nke leukoplakia na-agwọ ọrịa, dịka ọrịa ahụ nwere ike isi kpebisie ike, na-anọkarị. N'ọtụtụ ọnọdụ, dọkịta na-achọ ọrịa ahụ na nyocha ọzọ mgbochi. Naanị na ụfọdụ enwere mgbaàmà nwere ike igosi leukoplakia:
abawanye na olu nke mbupu mmiri;
ọ dị ka mmịfu ọbara si ekpuchi ikpu mgbe enwere mmekọahụ;
Mgbe otu onye na-efe efe na-ejikọta otu akara mgbaàmà pụtara:
ọ na-enwu ma na-ere ọkụ n'ime ikpu;
ihe mgbu n'oge nwoke na nwanyị;
nkwụsị nke ọrịa na-esi na ikpu na-esi ísì ụtọ.
Leukoplakia nke cervix - ihe ime?
Mgbe nchọpụta nke leukoplakia nke cervix, a chọrọ ọgwụgwọ ịmalite ozugbo. N'ibu nnukwu ihe ize ndụ nke degeneration n'ime ọrịa kansa, a gwara ndị dọkịta ka ha rịọ enyemaka na ntanye mbụ nke ụdị ọgwụgwọ. Na mbụ, ndị dọkịta na-agwa gị ọgwụgwọ iji kpochapụ usoro mkpasu iwe, ma ọ bụrụ na ọ bụla, na ihe ndị ọzọ na-akpali akpali. Banyere akpụkpọ anụ mucous n'onwe ya, ndị dọkịta na-anwa imetụta ya ma wepụtakwuo mgbasa. Mwepụ nwere ike ime na:
ebili mmiri redio;
Mwepụ redio nke leukoplakia cervical
A na-eji nlezianya na-agwọ ọrịa elekoplakia nke cervix akpanwa. Ihe kachasị mkpa nke ntanetị bụ mmetụta na-adịghị mma maka ọnya ahụ site na electrode pụrụ iche. Dọkịta na-abanye n'ime ya ma banye usoro anụ ahụ metụtara. N'ihi ikpo oku, mmiri na-ekpochapụ site na mkpụrụ ndụ ndị na-adịghị ahụ maka ọrịa ma na-ebibi ha. Usoro a nwere ọtụtụ uru:
enweghị ihe mgbu;
nchikota nke mmebi nke ahụ ike;
enweghị ncha na saịtị nke ọgwụgwọ mgbe gwọchara ya.
Cukical leukoplakia - ọgwụgwọ laser
N'ịkọwa esi emeso leukoplakia nke cervix na otu ikpe, ndị dọkịta na-ahọrọkarị ọgwụgwọ laser dị ka ụzọ. A na-eme usoro ahụ na-enweghị kọntaktị na nke mbụ nke oge ịmalite ịmalite ịhụ nwa oge ma ọ dịghị achọ tupu ọrịa anwụrụ. Dọkịta na-eziga ụda laser na mpaghara ahụ emetụtara na ngwaọrụ pụrụ iche. Ọ na-ekpochapụ mkpụrụ ndụ ihe omimi site na akpụkpọ anụ mucous, mgbe ọ na-ekpuchi arịa ọbara ndị mebiri emebi. A na-emezi nlebara anya nke leukoplakia cervical.
Ohere nke ọbara ọgbụgba mgbe usoro ahụ gasịrị. A na-emepụta ihe nkiri coagulation n'elu, nke na-egbochi ọrịa. Uru nke usoro a gụnyere:
enweghị ụfụ anụ ahụ na saịtị ịwa ahụ;
mmeghachi anya ngwa ngwa.
Leukoplakia nke cervix uter - ọgwụgwọ na ndiife ọgwụ
Ọrịa leukoplakia nke cervix enweghị ike ịgwọ ya site n'enyemaka nke ụzọ ndị mmadụ. Ogbugbu, iwebata mkpuru osisi na mkpuru ahihia adịghị eweta uru, ma na-enye aka na mgbasa nke usoro nchịkwa na ịmepụta sel mkpụrụ ndụ. Nnyocha nnyocha sayensị egosila na ọgwụ herbs, infusions na decoctions eji emetụta metabolism n'ime anụ ahụ, na-eme ka ụbụrụ nke mkpụrụ ndụ na-agbasa, na-akwalite mmepe nke dysplasia.
Leukoplakia nke cervix uter - ọrụ
Enweghị mmetụta site na ọgwụgwọ ahụ, ọnụnọ nnukwu ọnya bụ ihe na-egosi ịwa ahụ. Nchịkọta nke cervix na leukoplakia bụ otu n'ime ụzọ nke ọgwụgwọ. Ọ na-agụnye mwepụ nke anụ ahụ emetụ n'ahụ na ọnụọgụ nke ọnya ahụ. N'ihi ya, dọkịta ahụ na-ewepu saịtị ahụ, n'ụdị ya na-akpọghachi cone - ya bụ aha ọrụ ahụ. A na-ebute mwepụ nke leukoplakia nke cervix na oke ihe ọkpụkpụ. N'ihu ọnụnọ mkpụrụ ndụ na-ebute mwepụ nke akụkụ nke akpanwa.
Menopause n'ime ụmụ nwanyị
Ara mụbara ma na-afụ ụfụ
Gini mere ogbugbu ji merie?
Ọgwụgwọ nke chlamydia na ụmụ nwanyị - ọgwụ ọjọọ
Ọrịa afọ iri na ise - mgbaàmà
Ntughari nke ovaries
Ovarian apoplexy - usoro nke nyocha na ụzọ nke enyemaka mbụ
Na mkpịsị ọbara ọbara kwa ọnwa - isi ihe kpatara nsogbu
Sarcoma nke akpanwa
US nke mammary glands - na ụbọchị?
Kedu ụbọchị mgbe m gachara nwanyị na m ga-atụrụ ime?
Nkita nwere ezé
Ndị na-eme ihe nkiri kachasị mma n'ụwa
Ọdịdị nke mkpụrụ akwụkwọ 2013
Ọnọdụ Basal na nke abụọ
Uwe a kpara maka ụmụ nwanyị
Egwu na akwa ukwu 2016
Urinary incontinence na ụmụaka
Ime ụlọ dị iche iche
Uro nke Dikul
Polyneuropathy - mgbaàmà
Kedu otu esi echekwa ntorobịa nke akpụkpọ ahụ?
Kedu ka Borodin si tụfuo mgbe ọ mụsịrị nwa?
Ndị na-eme ihe banyere ACE
Gwa na oven